Abaarta Halakeysay Puntland Oo Ka Sii Dareysa – Goobjoog News
Abaarta Halakeysay Puntland Oo Ka Sii Dareysa
Dadka ay abaaruhu ku heystaan degaannada Puntland ayaa maalinba maalinta xigta ay sii xumaanaysaa xaaladdooda, waxaana bakhtiyay xoolo badan oo isugu jira geel iyo ari kuwaasoo u dulqaadan waayay harraadka iyo xaaladda adag.
Waxaa sidoo kale markii ay abaaruhu xoogeysteen u dhimanayay dadka degaannada qaarkood sida carruurta iyo dadka waayeelka ah ee aan gaajada iyo oonka u adkeysan Karin.
Abaarta halakeysan gobollada waqooyi iyo bari ee Puntland ayaa laga soo sheegayaa in weli dadku aynaan helin gargaarkii beni’aadanimo oo ay u baahnaayeen.
Gurmadyo ayaa soconaya oo degaannada abaaruhu ka jiraan lagu gaarsiinayo dadka waxay cunaan iyo waxay cabaan intaba.
Qoysas badan oo reer miyi ah ayaana soo gaarayay muddooyinkii dambe dhulalka laamiga la siman waxayna ka imaanayeen dhulka fog ee baadiyaha ah.
Dadka shacabka iyo culumada oo isxil qaantay ayaana sameynaya gurmadyadani beni’aadanimo.
Weli gobollo badan oo ka tirsan Soomaaliya waxaa ka jirta abaar daran, Puntland gobollada ugu daran waxaa kamid ah Nugaal gaar ahaan degaannada laamiga ka fog, gobollada Sool iyo Sanaag iyo degaanno kale.
Wafdi ka socda Turkiga oo maanta gaaray Kismaayo
buy cialis online no prescription where to bay cialis (tadal...
missionary xxx mature gif [url=https://bursfisoman.cf]bursfi...
naturally lawyer online viagra without subscription least pr...
helen_moore chaturbate [url=https://kaiprogaltumou.gq]kaipro...
somewhere blow [url=http://cialislet.com/#]cialis tadalafil[...